ट्वीटरको नयाँ इन्टरफेस मन परेन ? यसरी फर्काउनुस् पुरानैमा - Gandak News
ट्वीटरको नयाँ इन्टरफेस मन परेन ? यसरी फर्काउनुस् पुरानैमा
गण्डकन्यूज द्वारा २५ श्रावण २०७६, शनिबार १५:१७ मा प्रकाशित
माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटर नयाँ इन्टरफेसका साथ प्रयोगकर्तामाझ आएको छ । पहिलेको भन्दा नौलो डिजाइन रहेका कारण यसलाई लिएर प्रयोगकर्ताहरुले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । केहीले नयाँ इन्टरफेस मन पराएका छन् भने केहीलाई पुरानै ठिक थियो भन्ने लागिरहेको छ ।
तपाईंलाई पनि ट्वीटरको नयाँ इन्टरफेस प्रयोग गर्न असहज भइरहेको वा पुरानो इन्टरफेस नै ठिक थियो भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ । यसका लागि प्रयोगकर्ताले पुरानै इन्टरफेसमा ट्वीटर प्रयोग गर्नसक्ने गरी पनि ट्वीटरले व्यवस्था गरेको छ । आखिर कसरी गर्ने त नयाँलाई पुरानोमा परिवर्तन ?
– सबैभन्दा शुरुमा ट्वीटरमा लग इन गर्नुहोस्
– त्यसपछि टाइमलाइनभन्दा बायाँ साइडमा ‘मोर’ लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्
– त्यहाँ धेरै अप्सन देखिनेछन्, सेटिङ एण्ड प्राइभेसी जानुहोस्
– त्यहाँ धेरै अप्सन देखिनेछन्, त्यहाँ ‘अबाउट ट्वीटर’ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्
– त्यस अप्सनमा क्लिक गरेपछि स्क्रिनको दायाँ साइडमा धेरैवटा अप्सनहरु देखिन्छन्
– त्यसमध्ये ‘डाइरेक्ट्री’ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाईंले पुरानो इन्टरफेसको ट्वीटर देख्न सक्नुहुनेछ । त्यसबाहेक ट्वीटरले तेश्रो पक्षका अन्य एक्सटेन्सन वा एप्लिकेशनमार्फत् पनि पुरानै शैलीको ट्वीटर प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।
यसका लागि तपाईंले सोही अनुसार तेश्रो पक्षका एक्सटेन्सन वा एप्लिकेशन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ।